Oholela indawo cinema wezwe ugxila Hollywood, American "Dream Factory". Ibe isilandelwa kinokorporatsiya Indian "Bollywood", uhlobo Analogue US ifilimu studio. Nokho, ukufana kwamazwi lezi ezimbili imidondoshiya of jikelele ifilimu umkhakha lilinganiselwe kakhulu, emafilimini aseHollywood ezwakala adventure, Westerns futhi isenzo amafilimu, futhi uthando indaba ephathwayo kuyehla kube ngesakhiwo melodramatic ngempela enesiphetho esijabulisayo. Ngo Bollywood amafilimu linqobe nesihloko of uthando unrequited futhi ubuhlobo bomkhaya eziyinkimbinkimbi. abadlali Indian zama ukunikeza izinhlamvu zabo zifana heroes yangempela ekuphileni kwansuku zonke. Finals kumafilimu Indian ngokuvamile esiyinhlekelele, futhi, njengoba umthetho, iphethini ophela akuhlangene ne-American Happy End.
Indaba cinema Indian usukela kuya ekuqaleni kuka-50-yalolucwaningo kwekhulu elidlule, lapho abadlali kuqala Indian, phakathi kwawo umqondisi kanye screenwriter Radzh Kapur. Awokwenza amafilimu kuyinqubo edangalisayo ezihambisana nezinkinga eziningi ezidinga izixazululo esiphuthumayo. Young Radzh Kapur kwaba onekhono, ngumuntu onobuqambi, waya ngokoqobo ukuphila kwakhe e-altare cinema. Okokuqala, Kapoor uzungezwe abantu abanazo, abaye yanquma nezindaba yenhlangano, futhi waqala ukuba abhale. I amafilimu wokuqala owenziwe kule studio Indian waba yimpumelelo enkulu. amafilimu ezimbili Raj Kapoor ngokukhethekile wayehlukile sibonga isixuku ukuthi kubalulekile kwezenhlalo, kwaba movie "Rogue" futhi "Master-420."
Ukuthandwa amafilimu Indian
Okwamanje, Bollywood engakathenjiswa umshado e okuzobe kudlalelwa amafilimu moralizovannyh ngokujulile izithombe ngothando futhi umkhaya ujabule yeshashalazi emhlabeni wonke. Ezinye amafilimu Indian setha uhlobo zomculo. I Bollywood kubhekwa ifomu enhle ukuba agqoke izinhlamvu zokubhukuda kazwelonke, izikripthi zilotshiwe kuhambisana namasiko komlando umphakathi, futhi abadlali Indian ozama ukulandela ukuthembeka izifundo. amabhayisikobho Indian Sentimental uwine izilaleli multimillion ngokushesha. izithombe zakhe ezinjengethi, "Zita futhi Gita", "Disco Dancer", "Veer-Zaara" ashiye akekho ngabandayo, zokugwazela obuqotho ubuqiniso. Abalingisi amafilimu Indian zinesipho ethile, banayo nezilaleli zakhe. Abantu bakholelwa konke okwenzekayo esikrinini, ukuzwelana heroes.
Omunye abadlali ovelele Bollywood Karina Kapur okungukuthi, ummeleli wokugcina edumile Kapoor lwamakhosi, yindlalifa umsunguli we-Indian cinema Radzha Kapura. Karina wazalwa ngo-1980, wabe esengeniswa-Harvard, Faculty of Law eminyakeni engu-17. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi ayengenazo izimpawu ukuze ikusasa lakhe kwezobuciko, kodwa nokho, lapho isikhulile Karina Kapur yabonakala isethi. Le filimu "Ababaleki", lapho wadlala indima abaholayo okuphambene Abhishek Bachchan (indodana umlingisi odumile Amitabh Bachchan), kwanhlanga zimuka nomoya. Indian cinema abadlali kujwayele ukuthatha ukwehluleka kanzima, futhi Kareena futhi ephatheke kabi ngoba wayenomuzwa wokuthi kwaba wehluleka ukubhekana indima yabo futhi ukuze isithombe asiphumeleli. Nokho, eziningana amafilimu elandelayo obonisa Kariny Kapur ukungabaza bakhe, wamphathela udumo actress kanye uthando moviegoers.
Indian abadlali amadoda - konke ubuhle njengoba ukukhethwa, futhi engxenyeni lensikazi inkanyezi Bollywood ezinhle kakhulu futhi kuphumelele, yebo, kubhekwa Ayshvariya Ray, lithandwa actress of Indian ifilimu, owawina isihloko "Miss World 94". Aishwarya wazalwa ngo-1973 e-ifilimu wangenela eneminyaka engu-24, ifilimu yakhe yokuqala kwaba Iruvar - "Duet" lapho wadlala indima ezincane. Umdwebo waya kungaqashelwa, ibhokisi ehhovisi namarisidi babe nesizotha, futhi Aishwarya Ngadumala. Nokho, ifilimu olandelayo Starring actress abasha ngaphansi kwegama "Uthando umkhohlisi" samenzela indondo ophezulu. Ngemva kweminyaka emithathu, Ayshvariya Ray wathola omunye umklomelo ngokubamba kwabo iqhaza ifilimu "Phakade eyakho." Ngo-2001, yena wayebhekwa njengoba elijabulela engcono ngendima ayidlala "Uthando -. Umvuzo" Eceleni, ngo-2002, Aishwarya ulilethele udumo yangempela ngemva evela ifilimu "Devdas" - iphrojekthi yimpumelelo kakhulu futhi ukheshi ngaleso sikhathi. Ngo-2003, umdlali yaba ilungu amajaji at Cannes. A inkampani yezimonyo owaziwa L'Oreal ahlinzekwa Aishwarya sokukhangisa inkontileka imali eningi, njengoba kwenza Coca-Cola Inkampani futhi Beers. Lo mlingisi igana Abhishek Bachchan, elidumile ifilimu umlingisi.
abadlali Indian kanye abadlali kungaba yisibonelo yizicukuthwane umusa ukuzibamba nangobuciko. Ngakho kuyinto Bachchan Abhishek futhi - omunye edume kakhulu futhi likufuna abadlali cinema Indian. Yena - indodana Amitabh Bachchan, odinga akukho isingeniso, nonina Abhishek sika - actress Jaya Bachchan - inkanyezi ifilimu okunjengalokho kuqala. Abhishek isikhathi eside betadisha eSwitzerland, sabe sesiya e-US, lithole ngezinga ukumaketha, kodwa ekugcineni ngemva kukayise futhi waba umlingisi. Wenza DEBUT lakhe ifilimu "Ababaleki", okuyinto kwaba umlingani actress Marina Kapoor. Ngemva kwalokhu Bachchan abasha wamenywa ukuba inkanyezi kule Loc ifilimu. Ngo-2007, Abhishek Bachchan washada actress Aishwarya Rai, futhi ngo-2011 indodakazi yabo Aaradhya ozalwa.
Abanye abadlali Indian ezizibandakanyile emphilweni studio iminyaka eminingi. Amitabh Bachchan siyingxenye ye umlando Bollywood, Filmography yakhe ihlanganisa imidwebo ezingaphezu kweyodwa namashumi ayisikhombisa, nakuba umlingisi seziqalile ukusetshenziswa wakhe kuphela ngo-1969 eneminyaka engu-27 eminyakeni. Eminyakeni yakhe engcono Amitabh ngenkathi umuntu ayengathola khona ukudlala izithombe 5-6. ifilimu yakhe yokuqala - "AmaNdiya Eziyisikhombisa." Ukuze lo msebenzi, Bachchan waklonyeliswa uMklomelo saVelonkhe Kuhle lwabalingiswa. Ngokweseka umdlalikazi ifilimu "Uthando alusoze uyafa 'Amitabh uye wathola umklomelo yemagazini Filmfare. ihora Finest Amitabh Bachchan wafika lapho izinkanyezi ku ifilimu "Zanjeer", ubuntu bakhe kwakungandile amaphoyisa, wazinikela okulwa nobubi. Namuhla Amitabha engu-71, futhi ubaba ujabule Abhishek Bachchan futhi uyise-the abadlali nenhle kakhulu Bollywood - Aishwarya Rai.
The best Soviet movie eqanjiwe
Imininingwane yokuthi ungasusa kanjani amazwana ku-Instagram. Phatha amazwana
Emabhulashini "Zoeva" makeup: izinhlobo, incazelo, izici libuyekeza beauticians
Kuyini nokunye okufana nokolweni: izinzuzo zayo kanye nezici sokulungiselela